सोधिने प्रश्न - जेड प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड
कम्पनी को लागि सोधिने प्रश्न
तपाईं आफ्नो उत्पादनहरु गुणस्तर कसरी सुनिश्चित गर्छन्?
हामी सिद्ध आपूर्ति श्रृंखला कडाई filtrated उत्कृष्ट विक्रेताहरु हुन्छन् स्थापित गरेको छ र प्रत्येक उत्पादन हाम्रो कारखाना जानु अगाडि परीक्षण गरिने छ।
तपाईं हाम्रो बजार मा आवश्यक छ जो कुनै पनि प्रमाणपत्र छ?
हो, हाम्रा सबै उत्पादनहरू ETL / CETL / इस्वी संवत् / ROHS / CEC प्रमाणित छन्। हामी पनि आफ्नो बजार आवश्यक छ कि विशेष प्रमाणपत्र लागि लागू गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं नमूनाहरू प्रदान गर्छन्? यो निःशुल्क छ वा छैन?
नमूनाहरू लागि उपलब्ध छ, तर भुक्तानी गर्नुपर्छ। आफ्नो दयालु समझ लागि धन्यवाद।
कसरी भुक्तानी सर्तहरू बारेमा?
टी / टी सबैभन्दा सिफारिस गरिएको छ, Paypal / वेस्टर्न युनियन / LC र भुक्तानी अन्य सर्तहरू पनि स्वीकार्य
तपाईं हामीलाई लागि OEM गर्न सक्नुहुन्छ?
हो, हामी आफ्नो व्यवसाय को विभिन्न मागहरू पूरा गर्न OEM, ODM, OBM संग प्रदान गर्नुहोस्।
तपाईँको ग्यारेन्टी कस्तो छ?
सामान हाम्रो कारखाना छोड्न देखि हामी संग 12 महिना ग्यारेन्टी प्रदान गर्नुहोस्। हामी पनि दीर्घकालीन मार्केटिङ संग प्रदान गर्न र समर्थन बिक्री पछि-, व्यावसायिक इन्जिनियर आफ्नो ग्राहकहरु 'आवश्यकताहरु अध्ययन गरेपछि सबैभन्दा उपयुक्त उत्पादनहरु सिफारिस गर्न मद्दत गर्नेछ, र आफ्नो विशेष आवेदन को कुनै पनि लागि समाधान अनुकूलन
उत्पादन लागि सोधिने प्रश्न
ठूलो सोरले र मोटर मेरो पंप काम किन धेरै तातो बन्ने?
सामान्यतया यो हिंसात्मक यातायात कारण छ, चुच्चो bents र रोटर स्टेटर संग मालिश गर्दा मोटर चलिरहेको छ। कृपया जाँच पंप तपाईं पुगेपछि प्याकेज राम्रो अवस्थामा छ भने।
मेरो पंप सानो पानी किन ड्र?
शायद पानी ड्र गर्दा पम्प पनि अनौठो हल्ला बनाउँछ भने, कृपया पम्प खोल्ने र यदि प्ररित गर्नेवाला सानो पत्थर द्वारा फँस छ जाँच गर्नुहोस्। तपाईं सानो पत्थर बाहिर सफा बिना पम्प स्थापना गर्दा यो नयाँ निर्माण पूल मा हुन सक्छ। यदि कुनै अनौठो हल्ला छ, तपाईं ठीक यसलाई स्थापित भए जाँच गर्नुहोस्, यो तपाईंको निर्वात उपकरण असफल हुँदा हुन सक्छ।
मेरो पम्प मोटर जल, कि कसरी हुन सक्छ?
तपाईं गलत एक दोहरी भोल्टेज पम्प मा भोल्टेज तार छ भने कृपया जाँच गर्नुहोस्।
No.17 Shangqiao रोड, Xiwu सडक, Fenghua, Zhejiang, चीन 315505
अब हामीलाई कल गर्नुहोस्: +86 574 28525988